KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii ay Bale iyo xulkiisa Wales ugu soo gudbeen wareega 8-da ee EURO 2016 – Gool FM
KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii ay Bale iyo xulkiisa Wales ugu soo gudbeen wareega 8-da ee EURO 2016
Byare June 25, 2016
(France) 25 Juunyo 2016. Xiddigaha Gareth Bale iyo Aaron Ramsey ayaa iska xaadiriyay wareega sideed dhammaadka Euro kaddib markii uu xulkooda Wales gool madi ah oo walima Kama gool ah uga adkaaday xulka Woqooyiga Ireland.
Haddaba waxaan halkan kugu heynaa waxyaabihii laga bartay ciyaartan:
Wales ayaa noqday xulkii ugu horreeyay oo ciyaar kala bax Euro ah ku guuleysta kaliya 1-shuut/laad oo goosha lala beegsado tan iyo xulka Greece finalk-kii Euro 2004.
Xulka Wales ayaa soo gaaray wareega sideed dhammaadka Euro 2016 sida ay sameeyeen oo kale koobkii ugu dambeeyay oo wayn ay ka qeyb galaan (Koobkii adduunka ee 1958-dii).
Xulka N. Ireland ayaa iska dhaliyay gool kuuma jirin ah (own goal) markii ugu horreysay tan iyo bishii October 2011 waxaana markaa ka dhaliyay isla laacibkii hadda ka dhaliyay ee Gareth McAuley kulan ay la yeesheen Talyaaniga.
Saddex Kama gool ah (own goal) ayaa ilaa iminka ka dhashay Euro 2016 waana in ka badan koobka kastaa ee Euro oo horey loo soo ciyaaray.
Ma jirin wax gool ah oo ay goosha la beegsadeen xulka Wales qeybtii hore ee kulankan, inkastoo ay sagaal fursadood abuureen qeybta hore kulankii ay ka soo adkaadeen Ruushka wareega group-yada.
Goolhaye Wayne Hennessey ayaa dhammeystiray 12-baas qeybtii hore ee ciyaarta waa in ka badan inta uu baasay Gareth Bale 10-baas.
Kaddib markii xulka Wales uu reebay N.Ireland yuu la ciyaari doonaa wareegga siddeed dhammaadka koobka qaramada Yurub?
“Isna waa uu sii joogayaa Juventus anna waan sii joogi doonaa.”